IHuawei P30 Pro, ukubonakala kokuqala kwisiphelo esiphakamileyo ngokusondeza ngakumbi | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Namhlanje iimodeli ezimbini zokugqibela eziphezulu ze IHuawei, iP30 kunye neP30 Pro. Ezi zixhobo zezakutshanje apho inkampani yaseTshayina ifuna ukuqhubeka nokucacisa ukuba ilapha ukukhuphisana nezona zibalaseleyo kwimarike, ikhupha iHuawei Mate 20 Pro ngokwaphezulu kwikhathalogu yayo.
Sinezandla zethu iHuawei P30 Pro entsha kwaye siza kukuxelela ukuba yeyiphi imbonakalo yethu yokuqala evavanya esi sixhobo sinomtsalane. Hlala nathi kwaye ufumane yonke into ekufuneka sikuxelele ngayo malunga neHuawei P30 Pro entsha.
Njengesiqhelo, namhlanje sidibana apha umfowunelwa wokuqala wesixhobo, izigqibo zam zokuqala malunga nokuchaneka okanye hayi kweempawu zayo kunye nokusebenza endinike kona emva kweeyure zokuqala zokusetyenziswa. Nangona kunjalo, njengesiqhelo, siza kukunika uhlalutyo olunzulu kunye novavanyo lweekhamera zabo kwiiveki ezimbalwa, ke akufuneki ulahle umkhondo wazo I-Androidsis kunye nejelo lethu YouTube, apho siza kukugcina ulumkele yonke into. Ke, hlala nathi kwaye ufumanise ukuba yeyiphi imbonakalo yokuqala le Huawei P30 Pro isishiyileyo.
1 Izinto kunye noyilo, ukujonga kokuqala
2 Izixhobo ezinkulu kunye nescreen esikhulu
3 Iindaba zeHuawei P30 Pro kunye nezinye ezingekhoyo
4 Ikhamera efanelekileyo kunye nebhetri efanelekileyo kwimarike?
Izinto kunye noyilo, ukujonga kokuqala
Ngesi sihlandlo uHuawei akasishiyelanga igumbi elininzi kakhulu ekucingeni, ibandakanye uyilo olufana ncam neHuawei Mate 20, ngakumbi ngaphambili, ukusukela Kucacile ukufakelwa kweshiya ukusinika «ukuhla» okugxilwe ngokuchanekileyo kwaye oko kugqibela ngokushiya bucala inkqubo "yenyanga" ethi iitheminali ezintsha zoluhlu lweGlass ye-Samsung ezikhoyo kwaye ikwakhona nakwisiphelo seHuawei uqobo. Nokuba kunjani, oku kukhetho lobuqu, kwaye ukuba ndinikwe ukhetho, ndiye ndafana negawuthi kune "notch" kunye "nenyanga". Ngesi sihlandlo, uHuawei uphinde wasebenzisa iglasi egosogoso kumacala enza ukuba kube mnandi.
Ubungakanani: X x 158 73 8,4 mm
Ubunzima: I-192 gram
Emuva sineglasi ebonelelwe kuyo imibala emine: Mnyama; Olubomvu, iTwilight kunye ne-Ice White. Uphumelele ngokupheleleyo umbala weHuawei P30 Pro ngaphandle kwamathandabuzo ukude ungabonakali. Nangona kunjalo, amalungiselelo amathathu iikhamera Yahluke mpela kuleyo sasinayo kudidi lweMate ngeso "sikwere". Ngoku sinamalungiselelo athe nkqo kwaye kuyo yonke loo nto isikhumbuza umzekelo weXiaomi Mi 9. Ngokumalunga nomgangatho wezinto, i-terminal ikhululekile njengoko kunokulindelwa.
Izixhobo ezinkulu kunye nescreen esikhulu
GPU IMali G76
Ubukhulu X x 158 73 8.4 mm
U bunzima I-139 gram
Sifumene kwiHuawei P30 ezinye zeempawu zobugcisa ezingasishiyi singakhathali kodwa ezingasusi kakhulu kwindawo yokuthuthuzela. Ngelixa sithi ndlela-ntle ekubonakaleni kobuso obuphezulu, uHuawei uyaqhubeka nokubheja kwiscreen somfundi osibonisa iminwe ebesoloko inika iziphumo ezilungileyo kwi-Huawei Mate 20 Pro, njengoko kunjalo kwiprosesa I-HiSilicon Kirin 980, le isetyenziswa yinkampani yaseTshayina kwiHuawei Mate 20.
Kule meko siqala nge Umboniso weOLED esingazi ukuba ngumenzi wayo okwangoku, kunye nokumelana namanzi Isiqinisekiso se-IP68. Kwinqanaba lokugcina kunye ne-RAM sinerhamncwa lokwenyani, I-8 GB ye-RAM kunye ne-128/256/512 GB yokugcina ukuba ziya kwandiswa ngenkqubo yeKhadi leMemori likaHuawei Nano kugxekwa kakhulu kodwa ukuba inkampani yaseTshayina inyanzelisa ukwazisa, ngaba izakugcina iyifumene? Akukabonakali. Kwinqanaba lesoftware, ukubheja ngokuqinileyo kwizinto zamva nje nge I-Android 9 Pie kunye ne-EMUI 9 yolwazi ngokwezifiso, yenye yezona zithandwa kakhulu ngabasebenzisi bayo kodwa ezingakhululwanga ngokwentsebenzo.
Iindaba zeHuawei P30 Pro kunye nezinye ezingekhoyo
Into yokuqala esithetha ngayo kule Huawei P30 Pro ngokuchanekileyo sisinxibelelanisi sejackphone se3,5mm, into eyayinayo iHuawei P20 Pro, kodwa uHuawei akafuni ukumelana nefashoni yokuphelisa eli zibuko. Yenzelwe yona Sinezibuko elinye le-USB C 3.1, asinayo i-3,5mm Jack. Ke ngoko sifumana indalo yendalo yeHuawei P20 Pro, sisebenzisa ithuba lokuvunywa kwe- "drop" efakwe ngaphambili kweHuawei Mate 20 ukuba abasebenzisi bayithande kakhulu ukusebenzisa iscreen kunye nokuhlala kwigophe isikrini emacaleni.
Ngokwenxalenye yayo, sinezinto ezimbalwa ezitsha kwinqanaba lokongezwa komzimba, isikrini I-6,47-intshi ye-OLED kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD + (2340 x 1080 pixels), Kuninzi okukhoyo ukuba uHuawei ngewayenikezele nge-LG xa kusenziwa ezi paneli, kwaye inyani kukuba ziyafana nezo zinikezelwa yiSamsung kwezinye iiterminal ezinje nge-iPhone, nangona kunjalo, asikaluphathi ulwazi oluchanekileyo kwi oku kwahlukana. Apho siza kufumana khona utyalomali oluthe kratya ngokuchanekileyo kwikhamera, elifanelwe icandelo lalo kweli nqaku kwimpawu zokuqala.
Ikhamera efanelekileyo kunye nebhetri efanelekileyo kwimarike?
IHuawei P30 Pro isinika ikhamera edityaniswe nemodyuli ye- Abenzi boluvo abathathu bendabuko kunye ne-ToF sensor Oko kuza kujikelezisa ikhamera entle ukuba iHuawei Mate 20 Pro sele inike iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Enye yezona zinto zibalulekileyo zi-10x Zoom kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokugxila kwelaser. oko kunganika iziphumo ezilungileyo kuzo zonke iimeko. Oku ikakhulu ziimpawu esiza kuzifumana kwikhamera yeHuawei P30 Pro.
I-engile ebanzi ye-Ultra, 20 MP kunye f / 2,2
Ikhamera ephambili, i-40 MP kunye ne-f / 1,6
10x zoom zoom (5x optical and 5x digital), 8 MP kunye f / 3,4
Siyakushiya uluhlu lweefoto ezikhawulezayo Sikwazile ukuyithatha kunye nesiphelo sendlela, ekwabonelela nge Ikhamera yangaphambili ye-32 MP f / 2.0 ukuvula okunokubonelela ngemowudi yomgangatho ofanelekileyo kunye nokulungela abathandi be-selfie.
Okwangoku, ngaphakathi ngaphakathi kuhlala kungekho ngaphantsi kwe-4.200 mAh ibhetri, Ukuthatha ingqalelo kwiziphumo ezibalaseleyo ezinikezelwa yiHuawei Mate 20 Pro, kunzima kuthi ukuba singakholelwa ukuba siza kuqubuda phambi kwento enokuba yeyona nto ikwazi ukuzimela kwintengiso yefowuni ephathekayo, kuya kufuneka sizame.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Huawei P30 Pro, ukubonakala kokuqala kwisiphelo esiphakamileyo ngokusondeza okungakumbi